VSCO ဆိုသည်မှာအသိုင်းအဝိုင်းကြီးတစ်ခုနှင့်အတူဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည် Androidsis
VSCO ဆိုတာဘာလဲ၊ ကြီးမားတဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုနှင့်အတူဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်
Manuel Ramirez | | Android application များ, ဓာတ်ပုံ
VSCO သည်အဓိကအားဖြင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် filter application ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာနှစ် ဦး စလုံး၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ interface တစ်ခုတည်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသူကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားသောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည့်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ။
ပြီးတော့ဒီအချက်ဟာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာအကြီးမားဆုံးသောမသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းပဲ သင်က၎င်း၏ icon များနှင့် interface ကိုကိုင်မှီတိုင်အောင်, သူသည်သင်တို့ကိုခါးသီးမှု၏လမ်းပေါ်သို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည် အခြားအက်ပ်များ၌လုပ်သောအလုပ်များမတိုင်မှီ။ VSCO, ထိုအရည်အသွေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုသူများအတွက် app တစ်ခုပြုလုပ်ကြပါစို့။
1 VSCO ဆိုတာဘာလဲ
2 မိုဘိုင်း app ကဘယ်လိုလဲ
3 VSCO ကပေးသွင်းငွေပေးသွင်းရသည်
4 သင်၏မိုဘိုင်းအတွက် VSCO ကို Download လုပ်ပါ
VSCO Cam သည်အမှန်တကယ်ခေါ်ဆိုသည့်အရာဖြစ်သည် ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်ဓာတ်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့် app။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုပထမဆုံးစတင်သည့်ဒုတိယစက္ကန့်မှပေါ်လွင်လွန်းသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့မှုကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်၎င်း၏စစ်ထုတ်စက်များသည်လူအများအပြားကို၎င်း၏ကမ်းခြေနှင့်နီးရန်နီးကပ်စေသည်။
အပြင် filter များက ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်တည်းဖြတ်ထားသောဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဝေနိုင်စွမ်းရှိရမည် တခြားသူတွေကငါတို့နောက်ကိုလိုက်နိုင်၊ မှတ်ချက်ပေးနိုင်တယ်၊
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း VSCO သည်လည်း အနက်နှင့်အဖြူနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသော interface ကိုအတွေ့အကြုံအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်းကိုသူ၏အိုင်ကွန်များ၊ အမူအယာများနှင့်မတူညီသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်သောအခါ၎င်းကိုအလွန်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ဒီအပလီကေးရှင်းဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ထူးခြားတဲ့အတှေ့အကွုံသို့သူ့ဟာသူလှည့်ခဲ့သည် အရာမှနည်းနည်းပိုအသုံးပြုသူများသည်နှစ်ပေါင်းထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်နှင့်အမျှ VSCO ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နေရာရှိသည်။
VSCO ၏ထူးခြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအထူးစေသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဝေပါကအခြားသူများကပုံတူပွားနိုင်အောင်အသုံးပြုသော filter သည်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတွင်ရှိနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
မိုဘိုင်း app ကဘယ်လိုလဲ
VSCO သည်အခမဲ့မိုဘိုင်း application တွင်အားသာချက်များရှိသော်လည်း လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်မိုက်ခရိုငွေပေးချေမှုများရှိသည်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့် filter packs အတွက်သာရိုးရှင်းစွာပေးရသည်။ ဤ filter packs များကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောင်းချခြင်း (သို့) အခမဲ့ပေးခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့် VSCO နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက၊ မကြာမီသို့မဟုတ်နောက်မှသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများရရှိလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့ ရဲ့ app ကို၏အဓိကရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့ ၎င်း၏အရေးအပါဆုံးကဏ္sectionsများမှတဆင့်။
VSCO အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်များသို့မဟုတ် VSCO မှအကြံပြုသောသူများထုတ်ဝေသောဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများရှိသည့်သတင်းလွှာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤသတင်းလွှာသည်လူနေထူထပ်ပြီးမြို့ရိုးများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည် သို့မဟုတ်အခြားအက်ပ်များသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များမှအချိန်ဇယားများ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ထို Feed မှဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသောကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်ဒါကြောင့်ငါတို့ကြိုက်တဲ့စစ်ထုတ်ခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်အသုံးချခြင်းသည်မကုန်ခမ်းနိုင်သောဉာဏ်ပညာရင်းမြစ်ဖြစ်လာသည်။ ယုတ္တိနည်းအရကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောစတိုင်၊ ရှုထောင့်၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ အရောင်စသည်ဖြင့်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
News ဘေးတွင်ရှိသောဤအပိုင်းသည်အယူအဆနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်း၏မှော်အတတ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း "curated" collection များတည်ရှိသည်, hashtags အတူတူပင်, ထိုပုံတူ, သဘာဝမြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်မြို့ပြဓာတ်ပုံရိုက်ဘို့ခွဲပြီးအမျိုးအစားများကျွန်တော်တို့ကိုယူပါ။
အမှန်တရား VSCO တွင်ရှိသောအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံဆရာများကိုသင်သိလိုလျှင်, ဒီအပိုင်းကိုအကြံပြုထားတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့, app ၏အတုထောက်လှမ်းရေးသို့မဟုတ် AI ကငါတို့ရှာဖွေနေသည့်ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်။ အရည်အသွေးမြင့် collection များကိုကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့ကဒီမှာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားတာတွေကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာအံ့အားသင့်စေဖို့နာရီနဲ့ချီပြီးအချိန်ဖြုန်းနိုင်တာပါ။
ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကို upload လုပ်ရင်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့က VSCO ကင်မရာကိုသုံးတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုထုတ်ဝေရန်မစီစဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အားသူတို့အားမြင်ရန်မရည်ရွယ်ပါက၎င်းသည် filters များကို အသုံးပြု၍ ဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသည် app ၏အဓိကဝင်ရိုးဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည် VSCO ၏အဓိကကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုခလုတ်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးသောဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသာကြည့်ရှုရန်စတူဒီယိုတွင်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ခလုတ်ကိုထိပ်ပိုင်းမှတွေ့ရမည်။ လိုပဲဓာတ်ပုံဇယားကွက်၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲရန် (သို့) ညွှန်ကိန်းများကိုပိတ်ထားရန်လိုသည်
Edit: ဤအရပ်မှ VSCO ၌ရှိသည့် filter များနှင့်အခြေခံကိရိယာအားလုံးနှင့်အတူ mode ကို edit လုပ်နိုင်သည်
ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန်ခလုတ်: သင် VSCO ကင်မရာကိုသုံးသည်
မင်းဒီကိုတွေ့နိုင်တဲ့အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လည်း VSCO ကြေးပေးသွင်းမှုကိုရယူနိုင်သည် အရာကျွန်တော်အောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့အထူးခြားဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့၎င်းရဲ့ filter များပါ။ နှင့်အတူ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် 200 ကျော်, များစွာသောငွေပေးချေမှုအောက်မှာကျနော်တို့ collection များကိုအောက်မှာတွေ့လိမ့်မည် နှင့်ထိုအစားအစာသို့မဟုတ်ရှုခင်းများ၏ဓာတ်ပုံများကို, ဒါမှမဟုတ်သင်တန်း၏ပုံတူကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြား; အနည်းငယ် Adobe Photoshop ကင်မရာစတိုင်.
ဤစစ်ထုတ်ကိရိယာများကိုအသစ်သောအသစ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသင်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပေးချက်များကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ VSCO တွင်အသိဥာဏ်ရှိသောစစ်ထုတ်စက်လည်းရှိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါကအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည် နားလည်သောသူသည်သူတော်ကောင်း ဖြစ်၍၊ အခင်းဖြစ်ပွားရာ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Artificial Intelligence ကိုသုံးပြီးဒီဓာတ်ပုံဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ထက်ပိုပြီးလုပ်နိုင်မှာပါ။
အပြင်ကြောင်းကနေ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓါတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လက်စွဲလမ်းဖြင့်တိုးတက်စေရန်ကိရိယာများစွာရှိသည် ကျွန်တော်တစ် ဦး အချို့သောစတိုင်လျှောက်ထားကြသောအခါ
app ကို သူ့မှာသူ့မှာကိုယ်ပိုင်ကင်မရာရှိပြီးအဖြူချိန်ခွင်လျှာကိုပြောင်းလဲစေတယ် သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိစေရန် RAW ဓါတ်ပုံများကိုပင်ရိုက်ကူးပြီးနောက်၎င်းကိုပြန်လည်ထိတွေ့နိုင်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်မှာအခြား application များကထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခွင့်ပြုသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။
ဤနေရာမှ VSCO ကိုရည်ရွယ်သည့် app တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းထောက်ပံ့ပေးသည် ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်နောက်လိုက်များအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဖန်တီးပါ ငါတို့ထုတ်ဝေကြပြီ။
ငါတို့တောင်လုပ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုရှိစေရန်အခြားအသုံးပြုသူများ၏ဓါတ်ပုံများကိုပေးပို့ပါနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေ၊ အခြားအသုံးပြုသူများဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်စေဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုပြသသည့်အရာအဖြစ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစုစုကိုဖော်ပြရန်နေရာကဲ့သို့သောအထူးထိတွေ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းပေးနိုင်သည်။
ဒါကိုသင်အားကိုးရပါမယ် ပရိုဖိုင်းများသည်လူသိများပြီးသင့်နောက်လိုက်များမည်သူဖြစ်သည်ကိုပင်သင်မမြင်နိုင်ပါ။ ထိုအတကယ်တော့ သူတို့ဓါတ်ပုံများကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းမပြုနိုင်ပါ ငါတို့ပရိုဖိုင်းကိုသွင်းထားကြောင်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ VSCO ဟာဒီအပိုင်းကိုအသုံးပြုသူများနှစ်သက်ရာနှင့်မတူဘဲဖန်တီးမှုအရှိဆုံးဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းချစ်ခင်တွယ်တာမှုဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
VSCO သည်ပြည့်စုံသောငွေပေးချေမှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည် အဲဒါကကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး ဆောင်သည်
ကြိုတင် 200 ကျော်နှင့်ပြည့်စုံစာကြည့်တိုက်
Hsl- HSL ဖြင့်အရောင်များ၊ အရောင်အသွေးနှင့်အရောင်အရောင်များကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါ
ရုပ်ရှင် X: VSCO ကြိုတင်မျိုးဆက်သစ်
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း- ရွေ့လျားနေသည့်ပုံကိုဖန်တီးရန်ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ပုံစံများကိုအုပ်စုဖွဲ့ပါ
El ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်ကြေး ၂၁.၉၉ ကျသင့်မည်ဆိုလျှင်လစဉ်ငွေပေးချေမှုမှာတစ်လလျှင်ယူရို ၁.၈၃ ဖြစ်သည်.
သင်၏မိုဘိုင်းအတွက် VSCO ကို Download လုပ်ပါ
VSCO နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာကျွန်ုပ်တို့မှာစာရင်းသွင်းခြင်းကိုလုံးဝမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ၎င်းတွင်အတွေ့အကြုံများသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ၎င်းတွင်ကြော်ငြာများမရှိသည့်အပြင်၊ သန့်ရှင်း။ သာယာသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအခါ၎င်းအလုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် Google Play စတိုးကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » VSCO ဆိုတာဘာလဲ၊ ကြီးမားတဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုနှင့်အတူဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်